Dhiiragalinta Nolosha iyo Xikmado Nolosha Ku Saabsan - Diblomaasi
Yaxye Maxamed Abubakar
Maqaalkaan waxaan ku soo qaada neynaa xoogaa dhiiragalin, iyo in aan ku cibra qaadanno wixi aan nolosha tan lakulanno. Inta badan waxaan adeegsan doonaa garaadkeyga iyo wixi aan nolosha kabartay, ayadoon kamar neyn in aan oraahyadi laga yiri ciwaanka miiska inoo saarran Aan had iyo jeer qeyb kasoo qaadan doonna.
Waxaan had iyo jeer u baahan nahay, in aan fiira gaara u yeelanno wax kasta oo dhacaya, oo aan cashar ka qaadanno xaalad kasta iyo dhacdo kasta oo na soo marta, taas waxaad ku arkaysaa, annaga oo mar walba la tashanno dadka khibradda iyo aqoonta u leh casharada iyo wacdinta iyaga sababtuna tahay waayo aragnimadooda caqliga iyo fikradaha wanaagsan leh. Hadii alle raali kanoqdo waxaan kuu soo gudbin doonaa waxyaabo iyo hadalo aan dhiira galin kaheleynno, sidaa darteed akhristoow si taxaddar leh u akhri.
Halkaan waxaan kuugu soo gudbinaa hadallo nolosha ku saabsan
Noloshu dhadhan la’aan waaye hadey Rajo jirin.
Farxad ha ku faanin quruxdaada, lacagtaada, ama wanaagga asalkaada, waayo adigu maadan abuurin.
Ha ku faanin shahaadooyinka aad heysatid, maragnimadu had iyo goor maahan caddayn dhaqqan ballaaran, laakiin cadeynta dhaqangaadu waa ereyadaada iyo dhaqankaada.
Waxaad ogaan doontaa in noloshu wali qiimo leedahay, hadaad dhoola cadeyso.
Iskuulka ama jaamacadda waxaannu ku soo baraney in wax labaranaayo kadibne imtixaan lagelaa, balse aduunkaan imtixaan ayaa galee kadibne aqoon ayaa kuu siyaadee.
Maskax xoog leh had iyo jeer waa rajo, mar walbana rajo bay leedahay.
Noloshu waa gaaban tahay, laakiin belaayooyinku way sii dheereeyaan.
Mararka qaar Ilaaha Qaadirka ah Albaab ayuu inaga xiraa si uu i noogu furo albaab kale oo ka fiican, laakiin dadka badankiisu waxay lumiyaan waqti iyo tamar marka ay fiirinayaan albaabka xiran, halkii Albaabka rajada ee laga furay hortooda uu ballaaran.Dhoola caddeynta ayaa ah cinwaanka jilicsanaanta iyo dhadhanka wanaagsan sidaa darteed ka dhigo mid wehel kuu ah.
Rajooyinka waaweeyn ayaa keena dadku in ay maqaam iyo meel sare kamuuqdaan.
Muhiim ma ahan waxa kugu dhaca, laakiin waxa aad ka yeeli doonto waxa kugu dhaca ayaa ujeedku noqon.
Noloshu waa riyo inagu toosi naysa dhimashada, oo adigoo u hanqal taagaya ayey geeridu ku haleelee.
Related Topics:Dhiiragalinta Nolosha: Halkaan Waxaan Kuugu Soo Gudbinaa Hadallo Nolosha Ku Saabsan
Waa qoraa ka tirsan Somalism Waa akhriste wax ka qora arimaha bulshada sida: dhiiragalinta, wacyi gelinta, wuxuu kaloo ka faaloodaa taariikhda, sooyaalka islaamka iyo tan Soomaalida, sidoo kale qoraaggu wuxuu faalleeyaa dhiganayaasha ku qoran afafka Soomaaliga, Carabiga. Qoraagu wuxuu ku xeel dheer yahay baaritaanka macluumaadka iyo soo gudbintiisa.